NakomotoDark စျေး - အွန်လိုင်း NKT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NakomotoDark (NKT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NakomotoDark (NKT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NakomotoDark ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NakomotoDark တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NakomotoDark များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NakomotoDarkNKT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00254NakomotoDarkNKT သို့ ယူရိုEUR€0.00215NakomotoDarkNKT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00195NakomotoDarkNKT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00231NakomotoDarkNKT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0226NakomotoDarkNKT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.016NakomotoDarkNKT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0562NakomotoDarkNKT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00947NakomotoDarkNKT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00336NakomotoDarkNKT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00356NakomotoDarkNKT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0564NakomotoDarkNKT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0197NakomotoDarkNKT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0136NakomotoDarkNKT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.19NakomotoDarkNKT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.429NakomotoDarkNKT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00349NakomotoDarkNKT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00389NakomotoDarkNKT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0789NakomotoDarkNKT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0177NakomotoDarkNKT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.272NakomotoDarkNKT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.01NakomotoDarkNKT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.984NakomotoDarkNKT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.186NakomotoDarkNKT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0698
NakomotoDarkNKT သို့ BitcoinBTC0.0000002 NakomotoDarkNKT သို့ EthereumETH0.000007 NakomotoDarkNKT သို့ LitecoinLTC0.00005 NakomotoDarkNKT သို့ DigitalCashDASH0.00003 NakomotoDarkNKT သို့ MoneroXMR0.00003 NakomotoDarkNKT သို့ NxtNXT0.198 NakomotoDarkNKT သို့ Ethereum ClassicETC0.000375 NakomotoDarkNKT သို့ DogecoinDOGE0.733 NakomotoDarkNKT သို့ ZCashZEC0.00003 NakomotoDarkNKT သို့ BitsharesBTS0.0783 NakomotoDarkNKT သို့ DigiByteDGB0.0813 NakomotoDarkNKT သို့ RippleXRP0.00903 NakomotoDarkNKT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00009 NakomotoDarkNKT သို့ PeerCoinPPC0.00843 NakomotoDarkNKT သို့ CraigsCoinCRAIG1.16 NakomotoDarkNKT သို့ BitstakeXBS0.108 NakomotoDarkNKT သို့ PayCoinXPY0.0444 NakomotoDarkNKT သို့ ProsperCoinPRC0.319 NakomotoDarkNKT သို့ YbCoinYBC0.000001 NakomotoDarkNKT သို့ DarkKushDANK0.816 NakomotoDarkNKT သို့ GiveCoinGIVE5.5 NakomotoDarkNKT သို့ KoboCoinKOBO0.579 NakomotoDarkNKT သို့ DarkTokenDT0.00234 NakomotoDarkNKT သို့ CETUS CoinCETI7.34